Lelee ndị ọbịa na-agagharị, Lelee, zụta na ezigbo oge! | Martech Zone
Lelee ndị ọbịa na-agagharị, Lelee, zụta na ezigbo oge!
Monday, August 27, 2012 Sundaybọchị Sọnde, Ọgọstụ 26, 2012 Douglas Karr
Nchịkọta anaghị enye gị stats dị omimi na akparamàgwà agwa ịkwesịrị iji melite ahụmịhe ịzụ ahịa n'ịntanetị. Lexity nwere otu ngwa, Lexity Ndụ, nke na-enye gị ohere ileba anya ndị ahịa na-agagharị, lelee ma zụta na ezigbo oge. Lexity Live bụ ngwa anaghị akwụ ụgwọ na-akwado ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ isi ecommerce n'elu ikpo okwu na ahịa.
Nke a bụ mmebi nke Lexity Ndụ si ha na saịtị (ijide n'aka na ị ga-ahụ Ngosi Live):
Nyochaa ọrụ ndị ahịa gị n'oge - Lexity Live bụ ngwa nyocha okporo ụzọ weebụ na-akwụghị ụgwọ maka ecommerce, yana nsuso ndị ọbịa oge. Ngwaọrụ ndị ọzọ dịka Google Analytics nwere ike iwe ọtụtụ awa iji hazie data, oge gafere ka ị meghachi omume. Na Lexity Live, ezigbo ozi gbasara ndị ọbịa na saịtị ugbu a na-ahapụ gị ile ndị ahịa gị anya na ibe weebụ gị na ibe edemede, mụta maka ngwaahịa gị na ibe ngwaahịa, ma pụọ ​​site na ndenye ọpụpụ ịzụta, niile ka ọ na-eme.
Sochie okporo ụzọ ụlọ ahịa gị - Hụ otu esi azụ ahịa gị na - akawanye mma n’oge na mgbe oge azụmahịa gị kachasị elu, mgbe ị na - enyocha ebe ndị ahịa gị na - abịa na ihe ha na - achọ. Lelee mkpesa na ndị ọbịa pụrụ iche, ihu akwụkwọ, isiokwu isiokwu, saịtị na-ekwu okwu n'elu, injin ọchụchọ, na geolocation.
Hụ ebe ndị ahịa gị na-eji oge ha - Kedu peeji ndị ahịa gị na-ele anya na ogologo oge? Ebee ka ha na-ada? Chọpụta site na ịchụ onye ọ bụla na-azụ ahịa na ịhụ ezigbo omume ha na ụlọ ahịa ecommerce gị. Zuru ezu ụzọ na peeji nke analysis akụkọ nke pụrụ iche ọbịa na-agụnye oge na saịtị, ruo abụọ.
Lexity nwere ụfọdụ ngwa ndị ọzọ akwụ ụgwọ na ị nwekwara ike ịgbakwunye, gụnyere: ndepụta ịzụ ahịa, mwepụta ịzụ ahịa Google, Nkata ngwa ngwa, Akụkọ Pinterest, na Ntughari. Banye maka Lexity Ndụ n'efu, ọ bụ ezie!
Tags: lexitylexity dị ndụmagentoezigbo oge nchịkọtaozugboozugboụlọ ahịastats
Aug 27, 2012 na 2:42 PM
Daalụ maka post, Douglas! Ọ na-atọ anyị ụtọ ịgụ banyere ya. Mee ka anyi mata ma gi onwe gi ma obu onye na agu akwukwo gi nwere ajuju banyere Lexity!
Nchoputa & CEO
Aug 27, 2012 na 3:59 PM
Ugbua zigara onye ahịa akwụkwọ ndetu, @ twitter-14135545: disqus ịdebanye aha ma bido nwalee ya.